Soo degso Dassault Mystère IV A FSX - Rikoooo
downloads 13 028
Wixii model ah la jaan qaada FS2004 riix halkan
dhalmo fiican iyo tayo sare leh, wax walba waxaa ka mid ahaa: Dhawaaqyada, qol dalwaddii iyo model.
U hubso in aad buuga akhrisato user ee Faransiiska. Ku jira repaints 9. The Jouse Mystère IV ahayd diyaarad a 1950s Faransiis dagaal-qarxiyay, diyaaradaha ugu horeysay transonic in ay galaan adeega ee French Air Force.
Mystère IV waxay ahayd horumarinta ah evolutionary oo ka mid ah diyaaradaha Mystère II. Inkasta oo sita muuqashadii dibadda ah si ay diyaaradda ka hor, Mystère IV ahaa in xaqiiqda design cusub oo horumar aerodynamic Diyaaradii supersonic. noocooda ugu horeeyay ee u duulay 28 September 1952, iyo diyaaradda galay adeega ee April 1953. Diyaaradaha ayaa marka hore 50 Mystere saarka IVA ayaa ku shaqeeya by Rolls-Royce British turbojets Tay, halka inta ka dhiman lahaa version Hispano-Suiza Verdon 350 of engine in Faransiis-dhisay.
Faransiis Mystère IV Sida at Bitburg Air Base (Germany), 1960s hore
Israel Mystère IV arkay tallaabo lagu guda Wars Arab-Israeli iyo ayaa ku biiray by Mystères Faransiis ee dhibaatada Suez. On 8 June 1967, diyaaradaha Israel ay ku lug lahaayeen weerarka naxdinta iyo muran badan USS Liberty.
India iibsanayo 104 oo ka mid ah diyaaradaha ee 1957. Waxaa la ballaadhan loogu isticmaalay in dagaalkii ka Indo-Pakistani ah 1965. On 7 September 1965, Hogaamiyaha Qiimeynta Ajjamada Devayya of Air Force Hindiya hoos u toogtay a F-104 Starfighter amray by Flight Lieutenant Amjad Khan ee Ciidamada Cirka ee Pakistaan ​​ee weerar badan Sargoda. Amjad u suurtagashay in ay goolal dhowr hits on Devayya ee Mystère oo la rumeysan yahay in ay la wada baabbi'iyey, oo sidaas daraaddeed ayuu jaray si ay u eegaan diirada u saaran kale. Si kastaba ha ahaatee, Devayya ee Mystère weli buuxsan, oo wuxuu si guul ah ku toogteen Starfigher ah. Devayya lagu dilay ama ugu dhakhsaha badan ka dib ku burburtay. dagaal Tani tegey dareemo in India ilaa ka dib markii la shaaciyay in John Fricker ee Battle for buugga Pakistan. Devayya waxaa lagu abaal VIR Maha ku Chakra Batuuta 23 sano ka dib markii dagaalka.
isey ka mid ah diyaaradaha ugu dhaqsiyaha badan ka dib markii uu bilaabay dagaalkii 1965 Indo-Pakistani, laakiin waxay arkeen tallaabo dheeraad ah ee dagaalkii Indo-Pakistani ah 1971. Waxaa la gabi ahaanba ay hay'daha ka mid ah Air Force Hindiya by 1973.